समाज – xem-bao-viet
फैलदो भक्काको स्वाद
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on फैलदो भक्काको स्वाद
दुई दशक बित्दानबित्दै भक्का यसरी फैलियो, अब घरघरमै आउँदैन, भक्का खान चाहनेहरू नै चोक–बजारसम्म धाउनुपर्ने भएको छ । चिसो मौसम सुरु भएपछि तराईमा विशेष गरी झापा र मोरङ जिल्लाका चोक–बजारमा भक्का खानेको भीड देख्न सकिन्छ । झापा– २०५० को दशकसम्म राजवंशी महिलाहरू भक्का लिएर एकाबिहानै घरघर डुल्थे । खान इच्छुकहरूले सट्टामा धान दिन्थे र भक्काले भोक मार्थे । भक्कासँग […]
क्रिकेट प्रशिक्षकको भ्याकेन्सी
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on क्रिकेट प्रशिक्षकको भ्याकेन्सी
क्रिकेटमा पनि प्रशिक्षक चाहिन्छ ? यस्तो भन्ने पनि नभएका होइनन्, तर यो त पुरातन सोच भयो । खेलाडीलाई सुरुआती दिनमा प्रशिक्षक चाहिन्छ नै, तर परिपक्व खेलाडीले भरिएको टिमलाई प्रशिक्षक चाहिन्न भन्ने पनि उत्तिकै छन् । अहिलेको भारतीय क्रिकेट टिमलाई खासमा प्रशिक्षक नै चाहिन्न भनेर पनि केही खेल पण्डितले नभनेका र नलेखेका होइनन् । क्रिकेटलाई आधुनिक युगमा प्रवेश भइसकेको मान्ने […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on एसइई : कसरी हुन्छ आन्तरिक मूल्यांकन ?
सोलुखुम्बु, सोताङ गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत तेजिना बस्नेत एसइइको तयारी गरिरहेकी थिइन् । महामारी तनावका बीच पनि उनले आफ्नो तयारी रोकेकी थिइनन् । टेस्ट परीक्षामा आफूले प्राप्त गरेका जिपिएबाट सन्तुष्ट नभएकाले बोर्ड परीक्षामा नतिजा सुधार्न कम्मर कसेकी थिइन् । तर बोर्ड परीक्षा नहुने थाहा पाएपछि उनी निराश छिन् । ‘टेस्ट बिग्रिएको थियो । जानेकै कुरा […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on पीडामा पाइलट : काम पाउनै मुस्किल
सन् २००८ देखि २०१५ सम्म पाइलट कोर्स गर्न विदेश जानेहरूको संख्या निकै थियो । तर, रोजगारीको अवसर नहुँदा २०१६ मा आएर यो संख्या घट्यो । २०१७ पछि फेरि पाइलट बन्ने क्रेज बढेको छ । परिणामस्वरूप तीन वर्षमा विदेशबाट कोर्स सकेर आएकामध्ये ३० जना पाइलट बेरोजगार हुनुपर्‍यो । सन् २००९ मा अस्ट्रेलियाको बासियर एभिसन कलेजबाट पाइलट कोर्स गरेर आएका अभयकुमार […]
विद्यालय धाउनु पर्ने छैन, होमवर्क गर्नुपर्ने छैन, असाइनमेन्ट पूरा गर्नु छैन, परीक्षाको तयारी गर्नु पनि छैन । घुमफिर गर्न, साथीसंगीसँग खेल्न, आफन्तकहाँ जान, किनमेल गर्नु पनि छैन । दिनभर के गर्दै बस्ने ? अहिलेका बालबालिकासँग थुप्रै विकल्प छन् । उनीहरू घण्टौंसम्म स्मार्टफोनमा हराउन सक्छन्, टेलिभिजनमा रमाउन सक्छन् । गेम, युट्युबदेखि फेसबुकसम्ममा उनीहरू एकोहोरिन सक्छन् । त्यसैले अहिलेका बालबालिकासँग खेल्नका लागि न […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on जातव्यवस्थासँग जुध्ने नेता जोडी
प्रतिनिधिसभा सांसद महेश्वर गहतराज र प्रदेशसभा सांसद उषा पुनको विवाह जनयुद्धको सुरुवातकालमा भएको हो । यो जोडीले २०५३ सालमा परिवारलाई थाहा नदिई प्रेम विवाह ग¥यो । बिहेपछि गहतराज एक्लै ससुराली गएर जानकारी दिएका थिए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो बिहेको कुरा सुनेर उहाँहरू रिसाउनुभएको सुनेको थिएँ । तर, म गएपछि त्यस्तो केही भन्नुभएन, सहजै स्वीकार्नुभयो ।’ […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on भ्यागुते रोगले चार दर्जन राँगा–भैंसी मरे
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा भ्यागुते र चर्चरे रोगको महामारीले झण्डै ४ दर्जन राँगा भैंसी मरेका छन्। पशु चौपायामा एक्कासी फैलिएको महामारीले शुक्रबार साँझसम्म बेलका–८ सिसौली टप्पुक्षेत्रका किसानका ४० भैंसी र राँगा मरेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। सुरुमा घाँटी सुनिने, नाकबाट लगातार सेतो सिंगान बग्ने, ¥याल काढ्ने तथा ज्वरो आउने र घ्यारघ्यार गर्ने लक्षण देखिने भैंसी राँगा […]